Dhibaatooyin cusub oo ku soo kordhay Samsung Galaxy Note 7 | Wararka IPhone
Dhibaatooyin cusub oo Samsung Galaxy Note 7 ah
Galaxy Note 7 wuxuu leeyahay dhamaan astaamaha lagu garto inuu ka mid yahay aaladaha lacagta ugu badan ku bixiyay shirkadda Kuuriya. Dhinac waxaan haysannaa lacag ay shirkaddu ku maalgashatay R&D si ay u bilawdo Galaxy Note 7, ololayaasha xayeysiinta kala duwan iyo kharashka ku baxaya in la beddelo dhammaan Galaxy Note 7 ee suuqa yimid ka hor intaanay bilaabin inay ka faa'iidaystaan ​​kii ugu horreeyay boosteejada. Wax yar usbuuc ka hor, barnaamijka lagu beddelayo boosteejooyinka halista u ah qaraxyada kuwa cusub ayaa bilaabmay, farqiga ugu weyni waa midabka astaanta batteriga, taas oo moodooyinka la beddelay ay yihiin buluug.
Waxay u muuqataa in boosteejooyinkan cusub ay sidoo kale dhibaato ku qabaan batteriga, laakiin ugu yaraan kiiskan iyagu ma sababayaan qaraxyada xarumaha, laakiin halkii waxay arkayaan sida batteriga dhaqso ugu daadanayo xitaa haddii terminal-ka uu hurdo iyadoo aan wax dhaqdhaqaaq ah la samayn. Xaaladaha qaarkood, batteriga ayaa hoos u dhacay 50% wax yar 30 daqiiqo. Xaaladaha kale, boqolleyda aaladda batroolka kama aysan dhaafin 10% ka dib markii ay habeenkii buuxisay. Nasiib wanaagse xilligan kiisaskan waxaa kaliya laga helayaa Kuuriyada Koonfureed.
Afhayeen shirkadeed ayaa sheegay in dhibaatadan cusub Sababtu maaha baytariyada ay Samsung ku isticmaasho boosteejooyinka la beddelay. Xitaa iyadoo sidaas ah, Samsung waxay xaqiijineysaa inay durbaba baareyso kiisaska si loo arko waxa dhibaatada ah ee shirkadda Kuuriya ay mar kale la kulaneyso Xusuus-qorista 7. Kahor intaan la bilaabin barnaamijka beddelka, Samsung waxay soo bandhigtay ikhtiyaarka ah soo celinta Note 7 iyo helitaanka Galaxy S7 ama S7 Edge oo lagu daray kala duwanaanshaha qiimaha boosteejooyinka, laakiin waxay umuuqataa inay dadku sii wadeen inay doortaan inay ku raaxaystaan ​​calankii ugu dambeeyay ee Kuuriya in kasta oo dhibaatada qaraxyada ay isticmaaleyaasha qaarkood la kulmeen.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Dhibaatooyin cusub oo Samsung Galaxy Note 7 ah
Waxay umuuqdaan inay sii qarxayaan
Waxay noqon laheyd mid xiiso leh haddii ay daraaseeyaan waxa ay soo sheegeen bilowgii: in terminalku umuuqday inuu leeyahay waxyaabo badan oo bloatware ah, mana garanayo, waxaan qabaa fikrad waali ah in mid ka mid ah codsiyadaas uu sababayo in qalabku ku wareego heerka kuleylka. Waxaan ka akhriyey meel suuqa ka mid ah uu hadda dalbanayo terminaal cusub si dhakhso leh oo aaney u helin waqti ay si habboon ugu tijaabiyaan aaladaha, oo aan fursad u helin in qalab "aan meel lagu dhigin" ku dhex yaal baarka ka hor inta aan la bilaabin.
Ku jawaab Andresandrei
Alejandro Cajal dijo
Waan ka xumahay jaahilnimada laakiin, boosteejooyinka leh dhibaatooyinka soo dejinta sida oo kale ama lacag yar ama lacag yar. Iyagu ma hayaan cusboonaysiintii ugu dambaysay ee Samsung u dirtay Note 7 si ayan u qarxin? Malaha balastarka waa in laga saaraa boosteejooyinka cusub iyadoo beteriyada la dayactiray.
Jawaab Alejandro Cajal
Madow dhalaalaya iPhone 7 waxay la kulantaa dhibaatooyin soo saar waxayna u imaan doontaa dhibco
Sida loo habeeyo macluumaadka lagu soo bandhigay jimicsiga Apple Watch